၂၀၁၂ ခု ဟောကိန်းများ | ကွန်ပျူ ဗေဒသုခုမ
၂၀၁၂ ခု ဟောကိန်းများ	# 2012 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများPublished January 2, 2012 | By Dr.Tin Bo Bo	.
Posted in နက္ခတ်ဗေဒင်, သင်္ချာဗေဒ, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged MaHaBote, Mahakarlagyi, Myanmar Astrology, Myanmar Astrology 2012, myanmar horoscope, myanmar zodiac, မဟာကာလကြီး, မဟာဘုတ်, အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာ, ဗေဒင်, မြန်မာ ဗေဒင်, မြန်မာ့ ရိုးရာဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်, ၂၀၁၂ ခု ဟောကိန်းများ, ၂၀၁၂ ခု ၁၂ရာသီခွင် အဟောများ, ၂၀၁၂ မြန်မာ ဗေဒင်	Reports to my Friends !
# လျှပ်တစ်ပြက်ဗေဒင် (57,894)# 2012 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (46,999)# 2013 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (46,948)# မွေးနေ့ဗေဒင် တွက်ကြမယ် (၁) (31,432)# အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်မေးနည်း (23,477)# (3)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (14,604)# (4)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (12,629)# (8)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,995)# (9)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,320)# ဧပြီလ (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (10,277)# ဧပြီလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (10,115)# ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (10,059)# မဟာဘုတ် စစ်တမ်း (9,857)# နာမည်သည် နောက်ဆုံးအဖြေလော? (9,819)# နဂါးနှစ် လာပြီ (9,305)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၂) (9,146)# သြဂုတ်လအတွက် သင်္ချာဗေဒ ဟောကိန်းများ (8,839)# အပြောင်းအလဲ များတတ်တဲ့သူ (8,512)# (1)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (8,204)# အောက်တိုဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (8,187)# အောက်တိုဘာလ (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (7,830)# မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်ကြမယ် (၂) (7,696)# နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (7,686)# မတ်လ (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင် (7,556)# စက်တင်ဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,271)# (၀)ကြွင်း မဟာဘုတ် ဖွား များ၏ ယေဘူယျဝိသေသ လက္ခဏာများ (7,254)# မွေးနေ့ မွေးရက် ထပ်တူကျခဲ့လျှင် . . . (6,923)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၁) (6,716)# (၇)ရက်သားသမီးများအတွက် သြဂုတ်လ ဟောကိန်းများ (6,483)# စကား (၆) ခွန်း လူ၌ထွန်း (6,036)	အားပေးတယ်ဆို Like လုပ်ခဲ့နော် !
4 Users Online	Link1 | Link2 | Link3Copyright © 2013. Compu BayDaThuKhuMa. Designed by CompuBayDaThuKhuMa.